Guides Archives - LODGGY
များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ငပလီကမ်းခြေကို ခရီးထွက်ကြပြီဆို သံတွဲကို ဝင်မလည်တာ၊ သံတွဲကို မရောက်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ သံတွဲမှာ လည်စရာမရှိဘူး၊ သံတွဲမှာ ပျော်စရာ၊လေ့လာစရာတွေမရှိဘူးလို့ ထင်ကြတာများပါတယ်။ တကယ်လို့များ ခရီးတွေပြန်ထွက်ရလို့ ငပလီကမ်းခြေကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆို သံတွဲမှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ Lodggy.com မှ ခရီးသွားရင်း လေ့လာရ ပျော်ရတာကို နှစ်သက်ကြတဲ့ ခရီးသွား ချစ်သူများအတွက် မြန်မာပြည်အဖိုးတန်များမှတစ်နေရာ သို့မဟုတ်…
Lodggy က ခါတိုင်း Hotel Review တွေရေးတယ်၊ ဗဟုသုတတွေ ရစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ မြန်မာရဲ့အလှဆုံး Destinations တွေကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် ခါတိုင်း Blog တွေ post တွေနဲ့မတူပဲ ဒီနေ့ Title အတိုင်း Travel Bloggers တွေရဲ့ Posts တွေကို ရှာပြီးပြန်Share…
Private Getaways Adventures From Yangon
တခါတလေကျရင် လူသူမရှိတဲ့နေရာကို ခရီးထွက်သွားလိုက်ချင်တယ်။ လူအများကြီးလဲမရှိဘူး၊ Private လဲဆန်မယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့မောင်းသွားလို့ရမဲ့ Vacation နေရာတွေရှာနေလားရန်ကုန်ကနေ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့အများဆုံး ၆ နာရီကျော်မောင်းပြီးသွားလို့ရမဲ့ Private Gataway တွေ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ပဲခူး 1.Swiss-Myanmar Orchards Bungalow (1.5 Hour drive from Yangon) ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း ၃၅ မိုင်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းကြီးပါ။ဒီရောက်ရင် picnic…
Trekking ပဲပြောပြော၊ Hike လုပ်မယ်ပဲ ပြောပြော သဘာဝ ရှုခင်းတွေထဲ မျောနေရတာတော့ မကြိုက်မဲ့သူမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ Adventures ကို ကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားတဲ့ အရသာအသစ် အဆန်းလေးရချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြို့ပြထဲမှာနေရတာ ကျဥ်းကျပ်လို့ ရှုခင်းကျယ်တွေ မြင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Trekking/Hiking သွားဖြစ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် သွားချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာတွေသွားမလဲ? မြန်မာမှာ Trekking လုပ်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေ တစ်ကယ့်ကို…
Top 10 Instagrammable places in Myanmar
အလှတရားတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာတော့စေတီပုထိုးတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ တောင်တန်းတွေ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအလှနဲ့ကျွန်းစုတွေ၊ မြောက်ဖျားမှာဆို ရေခဲတောင်၊ အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ ကမ်းခြေတွေ၊ လှိုဏ်ဂူတွေ၊ ရေတံခွန်တွေနဲ့ အလှတရားတွေပေါများပါတယ်။ ခရီးသွားဓါတ်ပုံလေးတွေ အတင်များဆုံးနဲ့ ထူးထူးခြားခြားလှနေတဲ့နေရာတွေကတော့…ဘယ်နေရာလေးတွေရောက်ဖူးပြီးပြီလဲ?ဘယ်နေရာတွေကော သွားဖို့ကျန်သေးကြလဲ ? ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးက ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ စေတီပုထိုးတွေပေါများလို့ Golden Land လို့ ကမ္ဘာကသိတဲ့…
ရန်ကုန်မှာလည်ရမဲ့ ထူးထူးခြားခြား နေရာများ
ရန်ကုန်မှာ ဘာလည်စရာနေရာတွေရှိမလဲလို့ တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မျက်စိထဲမှာအရင်မြင်တာက ဘုရားနဲ့ ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အဦးတွေပါ။ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်းနေရာတွေလိုက်ပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကိုတိုင် Urbex (Ubran Exploring) စိတ်ဝင်စားသူဆိုရင် ဒီ List ကဲနေရာတွေကတော့ ရောက်သင့်တဲ့နေရာတွေပါပဲ။ ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကစားကွင်း ငယ်ငယ်ကလေးကျောင်းသားဘဝတုန်းကဆို ကျောင်းပိတ်တိုင်းသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာ။ မြန်မာပြည် ရဲ့ ပထမဆုံး ပစ္စည်းစုံတဲ့ Amusement Park လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုပိတ်သွားမှန်းမသိပဲ သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ…
Hotels Open in Ngwe Saung During Monsoon 2017
Surfs up! Welcome to the Monsoon of Myanmar, where you have great surf and you will have the whole beach to yourself! Hotels in Ngwe Saung tends to shut down…
9 wonders of Shwedagon
For anyone visiting Yangon, Shwedagon Pagoda isasite not to be missed. With over 2600 years of history, it is bound to be shrouded with mystery, myths and legends.…
Best New Hostels in Yangon 2017
Yangon has matured tremendously in terms of services that are caters to the backpacker community in the last few years and you are no longer limited to dark and dingy…
Ultimate Hotel and Residence Swimming pool Guide in Yangon
Yangon is nothing but hot hot hot! You want to cool off in the pool but you don’t know where to go or how much they cost. We made the…